Mugabe's Win Poses Problems For African Union - WSJ
After Fractious Vote,
Leaders Must Reject
Or Affirm Results
By Margaret Coker and Farai Mutsaka
When Robert Mugabe, fresh from a victory in a one-sided election and a hastily arranged presidential inauguration, joins an African heads-of-state summit Monday, his colleagues will face a choice: chastise him or cement his claim as Zimbabwe's legitimate ruler.
The crisis in Zimbabwe is expected to overshadow the main agenda -- water and sanitation issues -- at the 53-member African Union's annual meeting in Sharm el-Sheikh, Egypt.
But despite global denunciations that Zimbabwe's elections were a sham, it is unclear how decisively the African Union will handle the one-time liberation leader. At least six African presidents and a prime minister have condemned the actions of Mr. Mugabe, 84 years old, in his quest to extend his 28-year rule.
Zimbabwe's electoral commission Sunday confirmed an overwhelming victory for Mr. Mugabe in a runoff held Friday. Mr. Mugabe was the only candidate after opposition leader Morgan Tsvangirai withdrew from the race because of intimidation and violence against his supporters.
Mr. Mugabe won 85.5% of the votes, according to the government commission, while Mr. Tsvangirai, whose name was left on the ballot, garnered 10%. Election officials reported a 42% voter turnout, similar to that in the first round of voting in March, when Mr. Mugabe placed second in official results, with 43% of the vote, behind Mr. Tsvangirai's 47%.